Maso Arabo: Famantarana Avokoa Izany Rehetra Izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2017 6:26 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Aogositra 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Fitaovana manan-danja ny famantarana mba hahazoana fampahafantarana mivantana na manambara hafatra ilaina ho an'ny fiainana andavanandro. Kanefa inona no zava-mitranga rehefa mamitaka ny famantarana ary tsy mifandraika amin'ny hafatra izay tokony hambarany akory izany.
Naka sary ity famantarana hita teny amin'ny Sampan-draharahan'ny Fifamoivoizana ity i BRN , monina any Al Ain, Emirà Arabo Mitambatra:
“Navoaka tao amin'ny birao iray eto Al Ain ity famantarana ity izay hanoratanao (ary hanavaozanao) ny fiaranao. Manantena aho fa mazava kokoa izany amin'ny teny Arabo noho ny amin'ny teny Anglisy,” hoy izy nanoratra.
Hoy ny fivakin'ny famantarana amin'ny teny Arabo : “Azafady ajanony eo amin'ny fitobiam-piarakodia voatondro ny fiaranao ary mirosoa eny amin ‘ny toerana fakana rosia hanaraha-maso ny fiaranao avy eny amin'ny latabatra filan-kevitra.”
Bilaogy amin'ny teny Arabo izay mandrisika ny mpamaky mba hanao tendry ny sarin'ny famantarana sy ny dokambarotra misy hadisoana ny Talasim, avy any Jordana ary namoaka izany tao amin'ny aterineto.
Ao amin'ity lahatsoratra ity , nampiseho ny dokambarotra izay navoakan'ny sekoly miteny anglisy iray tao amin'ny gazety tao an-toerana ilay mpamaky Omar Abu Arisheh. Mazava ho azy fa feno fahadisoan-tsipelina ny dokambarotra . Tsindrio eo amin'ny rohy raha hijery ny fahadisoana.
Mbola miaraka amin'ny Talasim ihany, nandefa ity sary manaraka ity i Shaden Saud avy any Arabia Saodita :
Mivaky toy izao izany amin'ny teny Arabo: Tranon'ny mpivarotena amidy – aloa eo noho eo na aloa tsikelikely
Avy amin'ny fanoloana ny litera iray ny fahadisoana. Lasa mivaky hoe mpivarotena ny soratra hoe mihaja.
Avy amin'i Bint Battuta monina any Bahrain ny famantarantsika farany, izay nandefa ity famantarana manaraka ity miaraka amin'ny lohateny hoe: “Tsara kokoa ny mahafantatra mialoha.” **
**Sary avy amin'ny: Guardian Unlimited